Alshabaab oo weerar ku qaaday Deegaan kala gadisan oo ku yaalo Gobolka Shabeelada Hoose | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Alshabaab oo weerar ku qaaday Deegaan kala gadisan oo ku yaalo Gobolka...
Alshabaab oo weerar ku qaaday Deegaan kala gadisan oo ku yaalo Gobolka Shabeelada Hoose
Degaanada Aw-dheegle iyo Bariire oo ka tirsan gobolka Sh/hoose ayaa la soo sheegayaa inuu dagaal ku dhexmaray xalay ciidamadda Dowladda iyo degaalyahano ka tirsan Al-Shabaab.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii rag ka tirsan Al-Shabaab ay weer ku qaadeen Saldhigyada Ciidamada Dowladda ay ku leeyihiin Aw-dheegle iyo Bariire oo horey looga qabsday Al-shabaab oo muddo dheer ka talineysay.
Dagaaladan oo socday muddo kooban ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, iyadoo uu jiro Khasaare labada dhinac soo gaaray sida dadka deegaanka ay xaqiijiyeen inkastoo tirakoob sax ah aan laga heynin.
Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa sheegay inay iska difaaceen weeraradaas, waxyeelana u geysteen kooxihii ka tirsanaa Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday inkastoo aysan sheegin khasaaraha dhankooda soo gaaray
Al-shabaab ayaa iyaguna sheegtay in weerarkaas ay Khasaare ku gaarsiiyeen ciidanka dowladda sida lagu faafiyey baraha internetka ee taageera kooxdaas.
Previous articleMadaxweyne Waare oo Amray in aan lagu Qaban Karin Baladweyne Banaanbax lagu Taageeraayo Farmaajo
Next articleMagaalada Ganacsiga Kenya oo u qurux badan
DF oo Magacowday guddigii farsamo ee lagu heshiiyey shirkii Dhuusamareeb
Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo tacsi u dirtay Wariye Cabduqaadir...